सर्वश्रेष्ठ सिनेमा गाडिहरु Featuring | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > सर्वश्रेष्ठ सिनेमा गाडिहरु Featuring
के कुराले तपाईंलाई उत्साहित चलचित्रहरू ट्रेनहरू प्रस्तुत गर्ने भन्दा बढी ट्रेन यात्रा लिन प्रेरित गर्छ? सबै भन्दा राम्रो सिनेमा गाडिहरु Featuring हाम्रो सूची मा एक नजर, र हामीलाई tweet @saveatrain र जो मान्छे तपाईंले देख्नुभएको छ हामीलाई भन्नुहोस् र तपाईंले धेरै तिनीहरूलाई प्रेम यदि हामी जस्तै.
सिनेमा हाम्रो छानिने को शीर्ष मा गाडिहरु Featuring छ – Harry Potter सिनेमा 1 गर्न 8 (2001-2011)
को प्रसिद्ध श्रृंखला आधारित पुस्तकहरू J.K द्वारा. Rowling, गाडिहरु Featuring यी आठ सिनेमा जवान विजार्ड बारेमा जादुई कल्पना फोटो, Harry Potter. उहाँले जादुई शक्तिहरु possesses जान्दछ र टोने र Wizardry को Hogwarts विद्यालय उपस्थित, जहाँ उहाँले चुनौतीहरू प्रशस्त भरिएको नयाँ जीवन होमियो गर्नुपर्छ, खलनायक, र विजयी.
तर कहाँ को रेल आउनु? हैरी गरेको विद्यालय को पहिलो दिन, उहाँले Hogwarts एक्सप्रेस बोर्ड छ, मंच मा स्थित एक रेल9⅓. यो केवल छ पहुँच चलिरहेको द्वारा – छिटो- मञ्चहरूमा बीच ईटा पर्खाल तिर9र 10. रेल सवार एक पटक, उहाँले रन Weasley र Hermione ग्राङजर पूरा, जो आफ्नो जीवन-लामो मित्र हुनुको अन्त.
चलचित्रहरू सबै भर, को Hogwarts एक्सप्रेस रेल प्रत्येक स्कूल वर्ष को शुरुवात र अन्त्य प्रतीक जारी र केही राम्रो शानदार storylines लागि क्यानभास प्रदान. विशेष गरी समय हैरी र रन रेल छुटेका र फ्लाई स्कूल एक ENCHANTED कार थियो!
निश्चित गर्न गाडिहरु Featuring यी सिनेमा कम्तिमा एक डाउनलोड आफ्नो फोन वा ट्याब्लेट तपाईं आफ्नो अर्को बुक अघि रेल यात्रा.
एम्स्टर्डम रेलबाट लन्डन
रटरडम रेल द्वारा लन्डन
साइनफिल द्वारा साझा गरिएको पोष्ट (@ city.of.cinema)
विचित्र र हृदयस्पर्शी, यस छान्ने, गाडिहरु Featuring सिनेमा, यसको लेखक-निर्देशक को सबै hallmarks छ, वेस एन्डरसन. आफ्नो पिताजी एक आकस्मिक मृत्यु पूरा गरेपछि, तीन भाइ बांड एक प्रयास मा रेल द्वारा भारत मार्फत यात्रा.
ओवेन विल्सन खेलिएको, Adrien Brody, जेसन Schwartzman, प्रत्येक भाइ निराश भोगिरहेका छ, र sulking र झगडे को धेरै ensue. तर पाठ्यक्रम, एक वेस एन्डरसन चलचित्र हुनुको – त्यहाँ धेरै हास्यकार मडारिनुहोस् छन्. एक भाइ आफ्नो छोडेर गयो गर्भवती घरमा घरमा श्रीमती र अर्को आफ्नो प्रेमिका बाट अपराधी र रोमान्स भेट्छ ट्रेनको एक परिचरको साथ.
एक venomous सर्प पनि छ, अन्त्येष्टि, एक ध्यान, र ... राम्रो, हामी दिन छैन कुनै पनि थप टाढा. यो पंथ क्लासिक तपाईं आफ्नो अर्डर गर्न प्रेरित गर्न दिनुहोस् रेल साहसिक.
न्युरेम्बरबर्ग बर्लिन ट्रेनहरूमा
आचेनदेखि बर्लिन रेलहरूमा
ह्यानोभरदेखि बर्लिन रेलहरूमा
ह्याम्बर्गदेखि बर्लिन रेलहरूमा
को पूर्वी एक्सप्रेस मा हत्या (2017)
स्टीव द्वारा साझा एक पोस्ट (@grushkov)
प्रसिद्ध अगाथा क्रिस्टी उपन्यास मा आधारित, यो आधुनिक remake Judi Dench सहित एक तारा-studded डाली छ, michelle Pfeiffer, पेनेलोप क्रूज, जोनी डेप, र Willem Dafoe. केनेथ Branagh Hercule Poirot को नेतृत्व भूमिका छ, र त्यो पनि फिल्म निर्देशन र यो गाडिहरु Featuring हाम्रो सिनेमा को भाग हो.
अलग परिचय र केही flashbacks देखि, सम्पूर्ण कहानी एक सेट छ लक्जरी रेल. एक लामो-योग्य छुट्टी लिन ओरियन्ट एक्सप्रेस बोर्ड्स. प्रथम श्रेणी लक्जरी बार मा र एक भोजन कार, ऊ अप्रत्याशित यात्रुहरूको समूह भेट्छ. तिनीहरूलाई को एक आफ्नो जीवन खतरामा छ र Poirot रंगरुट खोज्छ दाबी – एक सम्मानित गुप्तचर – उहाँलाई सुरक्षित राख्न.
उहाँले इन्कार, र यात्रु सबै सुत्न जाने. अर्को बिहान, यस यात्री हत्या पाइन्छ. कुरा बढी नाटकीय बनाउन, को मा रेल derails हिउँ. Poirot रेल ट्रयाक मा फिर्ता अघि अपराध समाधान गर्न recruited छ र प्रहरीले हत्या सजग बन्न.
सुन्दर भन्नुभयो मा, नाटकीय रहस्य thriller, कथा पोइरोटले हरेक यात्रीको अन्तर्वार्ताको रूपमा पत्ता लगाउँदछ र ती प्रत्येकलाई फेला पार्दछ एक गोप्य कुरा छ र सबै जस्तो देखिन्छ जस्तो छैन.
यो बीचमा एक-हेर्न पर्छ छ, गाडिहरु Featuring सिनेमा, मात्र शानदार कहानी र प्रथम श्रेणी अभिनय तर पनि लागि सुन्दर दृश्यहरु र रेल नै दृश्य.
ब्रसेल्सदेखि एम्स्टर्डम रेलहरू
लन्डन देखि एम्स्टर्डम रेल द्वारा
रेलबाट एम्स्टर्डममा ब्यान
पेरिसबाट एम्स्टर्डम रेलको माध्यमबाट
अन्तिम चलचित्रहरूको सूचीमा ट्रेनहरू:
साना इन्जिन त्यो सकेन (2011)
तपाईं सानो adventurers छ भने यात्रा तिमीसँग, तिनीहरूलाई यो बच्चा-मैत्री फिलिम संग यात्रा को लागि उत्तेजित प्राप्त. क्लासिक छोराछोरीको कथा एक तारा-studded डाली संग पूर्ण-लम्बाइ चलचित्र मा जीवन आउँछ. विशेष अभिनेता समावेश जेमी ली कर्टिस र Whoopi गोल्डवर्ग.
चलचित्र को साना इन्जिन निम्नानुसार – एक खेलौना रेल – DREAMLAND उनको साहसिक भर, त्यो अन्य रेल वर्ण र खिलौने संग पारस्परिक रूपमा. त्यहाँ वास्तविक संसारमा समानान्तर कहानी छ, जहाँ protagonist रिचर्ड भनिने सानो केटा छ. तथापि, जब रिचर्ड DREAMLAND भित्र पुग्छन् यी दुई दुनिया ठोक्किनु. आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ समस्या गराउँछ, त्यसैले ऊ फर्कनु पर्छ. उनी र खेलौनाहरू वास्तविक संसारमा फर्कन कोशिश गर्दा साहसिक र अपहरणको क्रम बढ्दछ.
रेलहरूको माध्यम बाट यात्रा गर्न ट्रेनहरूको सुविधा सहित चलचित्रहरू बाट प्रेरणा पाउनु कस्तो उत्तम तरिका हो!
ब्रसेल्स रेल द्वारा पेरिस
लन्डन देखि पेरिस ट्रेनहरूमा
मार्सिले रेलबाट पेरिस सम्म
एम्स्टर्डम रेल द्वारा पेरिस
Featuring गाडिहरु सम्बन्धित कथा तपाईंको आफ्नै सिनेमा लेख्न तयार? यात्रा www.saveatrain.com तपाईँको अर्को रेल साहसिक लागि सस्ता रेल टिकट प्राप्त.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-movies-featuring-trains%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#HarryPotter trainmovies रेल सुझावहरू